NY FIHAVANANA AMIN’ANDRIAMANITRA NO VOALOHANY – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 juillet 5, 2013 Laisser un commentaire sur NY FIHAVANANA AMIN’ANDRIAMANITRA NO VOALOHANY
«…, solon’i Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe: mihavàna amin’Andriamanitra anie hianareo» (2Korintiana 5: 20).
Tao amin’ny tanàna afovoany andrefana iray any Etazonia dia nisy olona sasantsasany nanapa-kevitra ny hanatona ny fiangonana iray tsy lavitra azy teo “mba hiaina izany hoe fampihavanana ara-bolon-koditra tena izy izany”. Taorian’ny hetsika nataon’ireo fiangonan-dehibe izay nangataka am-pahibemaso famelàna avy amin’ireo olona mbola velona ankehitriny, taranak’ireo andevo tamin’ny andro fahiny, no nitrangan’izany.
Ara-baiboly ny faniriana hiaina amin’ny fihavanana (na amin’ny fandriam-pahalemana), araka izay voasoratr’i Paoly apostoly manao hoe: “Raha azo atao, dia ataovy izay hihavananareo amin’ny olona rehetra”(Romana 12: 18). Ny antony lehibe indrindra hidirana am-piangonana anefa dia tsy ny hihavanana eo amin’ny ara-piaraha-monina aloha, fa ny hihavanana amin’Andriamanitra. Ny fametrahana ny fampihavanana amin’ny olona ho voalohany dia mamotitra raharaha (na koa toy ny mametraka ny sarety eo alohan’ny omby). Tahaka ny olona iray mivimbina harona handeha hioty voankazo kanefa tsy misy foto-boankazo maniry akory eo.
Ny fampihavanana ny mpanota amin’Andriamanitra no fahamarinana ambony indrindra ao amin’ny Filazantsara. Raha notanterahin’i Kristy izany ho an’ny rehetra (ho an’izao tontolo izao) dia ireo izay mandray izany amin’ny finoana ihany, toy ny fanomezana maimaimpoana avy amin’Andriamanitra, no mandray tombony avy amin’izany. Ao amin’ny fiangonana masin’Andriamanitra, ny Fanahy Masina dia “mamela isan’andro ny fahotako rehetra sy ny an’ny mino rehetra”. (Jereo Ny Foto-pianarana Kely). Izany no atao hoe mihavana amin’Andriamanitra ary ny vokatr’izany ho anao dia ianao manatona fiangonana iray ary manao ny asa fanompoana amin’ny hafanam-po ao.
Ny fihavanana amin’Andriamanitra no mialoha lalana; fa tsy hoe tanteraka aorian’ny fampihavanana ny tsirairay ao amin’ny fiaraha-monina. Ny fihavanana amin’Andriamanitra no mamporisika antsika hanatona fiangonana. Ao amin’ny fiangonana hita maso, ireo olona nofo aman-drà dia mifanohantohan-tsy ho lavo, vokatry ny asan’ny tenin’Andriamanitra ao aminy, no sady manao ny asan’Andriamanitra. Ny fototra mafy iorenan’ny fandriampahalemana eo amin’ny fifandraisan’ny samy olona dia ny fampihavanana antsika amin’Andriamanitra amin’ny alàlan’i Jesosy Kristy Tompontsika.
Publié parfilazantsaramada juillet 5, 2013 Publié dansUncategorized